अनिताको फेरियो रूप, श्रीमानको माया र हेरचाहले भयो नसोचेको चमत्कार (भिडियो सहित)
June 23, 2021 18966
अनिता खड्का र विनोद खड्काको यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कमै होलान् । यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टिक|टकबाट भाइरल भएको यो जोडीको वास्त`विकता निकैनै मार्मि`क र आत्मियताले भरिएको छ ।
अहिले पछिल्लो समय अनिताको स्वा`स्थमा निकैनै सुधार आएको छ । कुनै समय अनिताको शरीर`को तौल घटेर २७ किलो`सम्म पुगेको थियो । तर अहिले अनिता निकै मोटाएकी छिन । अहिले उनको तौल बढेर ५५ कि`लो पुगेको छ ।
अ`प्रेसन फे`ल भई`सकेपछि निकै नि दु`खद समयबाट गुज्रि`रहेको अनिता परिवार अहिले भने सामान्य खुसि र अधिक्तम दुखि नै छ खुसि यो मानेमा`कि अनिता हिड्न सक्नेसम्म भइन् अनि दुःखचाहिँ उनको उप`चार पैसा अभावले कहिले रोक्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन्छ ।भगवान् जस्ता श्रिमान पहिलोपटकनै थियो यसरी रोएको ,अनिताको सु-स्वास्थ्यका लागि उनले आफ्ना आशु`हरुलाई लुकाउनै सकेका थिएनन् ,पछिल्लो भिडियोमा हामिले यो प्रस्तुत गरिनै सक्यौ।
पछिल्लो समय भने अनिताको स्वा|स्थ्य अवस्था एकदमै सुधारिएको हामिले पनि देख्न सक्यौ र अनितालाई स्याहार गरेर बसिरहनुभएको दिदिले समेत अहिले निकै सुधा`र हुँदै गएको कुरा खुलाउनुभयो । त्यति मात्रै हैन पहिले अनिताले के खाँदैछु भन्नेनै आँकलन गर्न सक्दैन थिइन् तर अहिले गर्न सक्ने भएकि छिन् ।
अहिले भने अनिताले सामान्य आफ्नै तबरमा उठ्ने र टाउकोले इसारा समेत गर्ने र प्रष्ट नभएपनि बोलेको केही हदसम्म अनुमान गर्न सक्ने भएकि छिन् । उनको अनुहारमा बेग्लै चमक समेत देखिन्छ । त्यति मात्रै हैन, उनले थुप्रै खालका एक्सर साइज गर्दै आएकि छिन् र उनी पहिलेको तुलनामा निकैनै ठिक हुँदै आइरहेकि छिन् ।
Prevनेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा बिहानैदेखि देखियो यस्तो सम`स्या
Nextटिक`टकले गर्दा ११ जना सरकारी कर्मचारीको जागिर चट्ट
दुःखद खबर, बाढी पहिरो आउँदा २ जनाको मृत्यु, १८ जना बेपत्ता
आँखा`बाट आँसु बगिरह्यो र १० मिनेटपछि उनको मृ`त्यु भयो….
घट्यो सुनको मूल्य, आज कति पुग्यो त तोलाको ? हेर्नु`होस्..
सडकको कारण मानबहादुर आफ्नी छोरी-भतिजीसँगै सधैंको लागि बिदा भए
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134607)